Agoosto | 2014 | WEEJIDOW
Archive for Agoosto, 2014
War FARXAD LEH: SAWIRO: Musharixiinta Gudoomiyaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed oo Maanta Jeediyay Khudbado Taariikh Nololeedkooda Ku Saabsan
Agoosto 31, 2014
WAAJIDPRESS – 31 Aug 2014:
Hoos ka DAAWO Labada MUSHARAX:
Waxaa hoolka Shirarka Koonfur Galbeed ADC ee Baydhabo ka bilaabatay khudbado ay jeedinayaan musharixiinta Gudoomiyaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed xili berito lagu wado inay dhacdo doorashada Gudoomiyaha Cusub ee Baarlamaanka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Musharixiinta u tagaan jagada Gudoomiyaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed oo ka kooban labo xubnood ayaa maanta mid kasta laga dhageystay Taariikh Nololeedkiisa iyo waxa uu qaban doono hadii la doorto.
Labada Musharax ee isku soo taagtay Xilka Gudoomiyaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa magacyadooda kala aha mudane Cumar Aadan (Cumar Dheere) oo kasoo jeeda Beesha Gaaljecel – Hawiye ku dhashey Baledweyne, Wuxuu ahaa Wasiir Ku- Xigeenkii Gaashaandhiga IYO WASIIRKII Xanaanada IYO xoolaha Dowladihii CABDULAAHI YUUSUF IYO Sheikh SHARIIF iyo mudane Sareeyo Guuto General Xaaji Cali oo isna kasoo jeeda beesha Geeledle – DM, wuxuuna ahaa Taliyihii Nabad-Sugida SOOMAALIYA Sanadkii 1973.
Xildhibaanadii wax dooran lahaa oo dhan 95 mudane, ayaa maanta xaadir ku ahaa hoolka ADC-da kuwaasoo si fiican u dhuuxayay waxa kasoo baxaya afka musharaxiinta si uga dhex xushaan shaqsigii ay ku aamini lahaayeen masiirka Koonfur Galbeed – FILO video
Wararkii ugu dambeeyay ee Weerarkii lagu qaaday Godka Jilacow & Khasaarihii ka dhashay
Waxay faah faahin ka soo baxeysaa khasaarihii ka dhashay weerarkii abaabulnaa ee maanta lagu qaaday Xarunta Xabsiga Godka Jilacow, oo ku yaal Degmada Boondheere ee Waqooyiga Magaalada Muqdisho.
Weerarkaan wuxuu ku bilowday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa, kaasoo markii hore afka loogu dhuftay ilinka hore ee Xabsiga Godka Jilacow, waxaana xigay weerar fool ka fool leh.
Ilaa toddobo nin oo ka tirsan Shabaabka oo watay qoryaha nooca daran dooriga u dhaca, ayaa sidoo kale waxay xirnaayeen jaakadaha ka sameysan walxaha qarxa, waxaana la arkaayay qaarkood oo is qarxinaayay.
Dagaalka ayaa qaatay ku dhawaad Hal saac iyo bar,wuxuuna ku bilowday markii hore qarax gaari miineysnaa oo ka dhacay Afka hore ee xarunta, waxa ayna Maleeshiyadu kasoo talaabeen dhanka xiga Daljirka daahsoon ee Magaalada Muqdisho.
Weerarka ayaa la Tilmaamayaa inay waxyeelo kasoo gaartay ku dhawaad 8-Ruux oo ay ku jiraan Saraakiil iyo Ciidamo ka tirsanaa Xarunta Nabadsugida Qaranka ee Gobolka Banaadir, halka uu dhaawacana kor u dhaafayo 6 oo isugu jiray Nabadsugida iyo dad shacab ahaa.
Wararka waxa ay sheegayaan in kooxihii goobta weeraray la dilay oo meydkooda ay yaalaan xarunta dagaalka uu ka dhacay Weerarka, waxa ayna Goobjoogayaashu sheegayaan in Xarunta lagu dhex dilay Afar ka tirsanaa Maleeshiyada weerarka ku qaaday Xarunta.
Sidoo kale, Saraakiisha Hay’adda Nabadsugida Gobalka Banaadir weli kama aysan hadlin weerarkaan cuslaa ee maanta lagu galay xarunta Nabadsugida Gobalka Banaadir oo kamid ah goobaha sida weyn ammaankooda loo ilaaliyo.
Ururka Al Shabaab, ayaa waxa uu faah faahin ka bixiyay weerarkii hubeysnaa ee ay maanta ka geysteen Xabsiga Godka Jilacow ee Degmada Boondheer ee Gobolka Banaadir.
Waaliga Gobolka Banaadir ee Ururka Al Shabaab Sheekh Cali Maxamed Xuseen (Cali Jabal), ayaa sheegay in weerarkii Godka Jilacow uu ka dambeeyay markii ay ka war helayn in dadka Muslimiinta ah lagu dhibaateeyo, sida uu yiri.
Waaliga, ayaa ku waramaaya in jirdilka loo geystay maxaabiista Godka Jilacow ay isugu jiraan, dad cidiyaha laga siibo, qaar maqaarka/haraga laga saaro, qaar koronto lagu qabanaayo iyo ciqaabo kale oo dadka loogu geysto. Wuxuuna Godka Jilacow ku macneeyay meel dadka lagu dhibaateeyo, sida uu yiri.
Wuxuu kaloo sheegay in Xoogaga Shabaab ay ku dhaqaaqeen Godka Jilacow, markii ay ka war helayn dhibaatada dadka loogu geysto, isla-markaana ay ku qaadeen weerar xoogan oo khasaaro badan loogu geystay waxa uu ugu yeeray cadowga.
Barre Hiiraale OO ka DEGTEY MUQDISHO
Agoosto 30, 2014
WAAJIDPRESS – 30 Aug 2014:
General Gabre IYO afey OO la taagan Barre Hiiraale IYO ..
Waxaa goor dhow garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho kasoo caga dhigtay Diyaarad Khaas ah oo waday Hoggaamiye Kornel Barre Hiiraale iyo wafdi uu hoggaaminayo, wuxuuna hadda SHIR albaabada u xiran yihii la leeyahay Raisul WASAARAHA CABDIWELLI OO asbuucii hore DOWLAD GOBOLEEDKA LIXDA GOBOL u diidey in uu YIMAADO BAYDHABA JANAAY OO ah Caasimada DOWLAD GOBOLEEDKA KOONFUR GALBEED.
Wafdiga markii uu garoonka kasoo dagay ayaa waxaa Saxaafada la hadlay Afhayeenka Barre Hiiraale C/rashiid Sheekh Xuseen oo sheegay in imaanshahooda Salka ku haayo Marti galin ay ka heleen Dowlada Federaalka Somalia.
Sidoo kale, waxa uu Tilmaamay in Socdaalkooda Muqdisho uu yahay mid ay ula gun leeyihiin in DFS ay ugu sharaxaan wada-xaajoodkii ay la gaareen Axmed Madoobe.
Afhayeenka waxa uu tilmaamay in is afgarad laga gaaray wada-hadalkii ay Xukuumadda Federalka iyo Urur-gobaleedka ka odeeyeynayeen.
Dhanka kale, Mar wax laga weydiiyey haddii Maleeshiyadda Barre Hiiraale lagu biiriyey kuwa Ahmed Madoobe, waxa uu tilmaamay inaysan ciidamadeena ku biirin maleeshiyaadkaas balse Ciidamadeena si gaar ah u deggan yihiin Xero ay u diyaariyeen Xukuumadda Federalka, QM iyo Urur-gobaleedka IGAD, welina wax heshiis ah OO la geerey ma jiro, ayuu intaa raaciyey AFHAYEENKA Barre hiiraale.
War deg deg ah: Ciidamada Dowladda iyo Amisom oo la wareegay Degmada Buulo Mareer iyo dagaal culus oo ka qarxay
Ciidamada Dowladda Somaliya iyo Xoogaga Midowga Afrika ee Amisom, ayaa waxay duhurnimadii maanta ay bilaa dagaal kula wareegeen Degmada Buulo Mareer ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Ciidamada Dowladda iyo Amisom, ayaa dagaal culus waxay kala kulmeen Xoogaga Ururka Al Shabaab, ka gadaal markii ay gudaha u soo galeen Degmadaasi, iyagoona dagaalka isku adeegsaday noocyada kala gedisan ee hubka.
Labada ciidan, ayaa waxaa la soo sheegayaa in dagaalka ay kala kulmeen Shabaabku uu ahaa mid aynaan filayn, ha yeeshee ay kolkii dambe u suurta gashay in ay ka wada saaraan Degmadaasi.
Xilligaan waxaa degan xaalada Degmada Buulo Mareer, iyadoona ay hawlgal ka wadaan Ciidamada Huwanta, waxaana weeye hawlgalku mid ay ammaanka Degmadaasi ku xaqiijinayaan.
Abaan Duulaha Ciidanka Xooga Dalka General C/risaaq Khaliif Cilmi oo la hadlay Radio Muqdisho, ayaa wuxuu bidhaamiyay in ay si buuxdo ula wareegeen gacan ku haynta Buulo Mareer, isla-markaana ay ka eryeen mintidiinta Al Shabaab.
Abaan Duulaha, ayaa ku waramaaya in hawlgalada aynaan ka soconayn Gobolka Shabeellaha Hoose oo qura, balse sidoo kalana ay ka soconayaan Gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan.
Hawlgalkii saakay ka bilowday Gobolka Shabeellaha Hoose ee lagu qabtay Degmada Buulo Mareer, ayaa wuxuu cadeeyay inaanu jirin wax khasaaro ah oo ka soo gaaray Ciidamada Dowladda iyo Amisom, sida uu yiri.
Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Shabeellaha Hoose C/qaadir Maxamed Nuur (Siidii), ayaa sheegaaya in ay u diyaar garoobayaan inay ku dhaqaaqaan Degmada Kuntuwaarey ee Gobolka Shabeellaha Hoose, haddiiba ay qabteen Degmada Buulo Mareer.
Dhanka kale lama garanaayo halka ay marayaan Ciidamadii Dowladda iyo Amisom, ay saakay ku dhaqaaqay Degmada Baraawe ee Gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasoo la soo sheegaayo in barakac uu saakay ka bilowday.
Al Shabaab weli kama aynaan hadlin gulufyada xoogan ee ay ku qaadeen Ciidanka Xooga Dalka iyo Xoogaga Midowga Afrika ee Soomaaliya.
War deg deg ah: Ciidamo Katirsan Maamulka Jubba oo Qarax Lagu Laayey Xili Kismaayo…
Qarax xoogan Ayaa Waxaa uu ka dhacay Gudaha Magaalada Kismaayo ee Xarunta gobolka Jubada Hoose iyadoona Khasaaro uu geystay qaraxaasi.
Inkastoo aan si rasmi ah loo sheegi karin tirada ku waxyeelowday qaraxa oo ahaa miinada dhulka hoostiisa la geliyo ayaa waxa uu ka dhacay Fariisin ciidanka Axmed Madoobe ku lahaayeen Xaafada Shaqaalaha ee Magaalada Kismaayo.
Ilo wareed lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in 10 Askari kabadan ay dhaawacyo qaraxaasi kasoo gaareen halka wararka intaasi ku darayaan in askar qaraxa ku dhintay ay jiraan walaw aan xog faah faahsan helin.
Qaraxaan ayaa waxa ka hadlin mas’uuliyiinta maamulka Kumeel gaarka Jubba ee ka taliya Kismaayo waxaase jiray howlgalo saaka aroortii magaaladaasi ka sameeyeen ciidanka Axmed Madoobe kuwaasi oo ay ku baadi goobayeen dadkii qaraxii xalay ka dambeeyey.
Xaalada ayaa waxay tahay mid deggan iyadoona goobaha ganacsi iyo isku socodka dadka iyo gaadiidka uu caadi ushaqeynayo.
War Deg Deg ah Dagaal culus oo u dhexeeyo Ciidamada DF, AMISOM iyo Alshabaab oo goor dhow qarxay
War goor dhow naga soo gaaray Gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in halkaasi uu ka qarxay Dagaal xoogan oo u dhexeeya Ciidamada Dowlada Federaalka Somalia oo garabsanaaya kuwa AMISOM iyo Alshabaab oo dhinac ah.
Wararku waxa ay soo sheegayaan in Dagaalka uu xiligaani ka socdo laba qeyb oo kala ah Shalaanbood iyo qoryooley ee Gobolka sh/hoose, waxaana la soo sheegayaa in Ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowlada ay adeegsanayaan Hubka culculus.
Sidoo kale, wararku waxa ay Tibaaxayaan in Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM ay si buuxda ula wareegeen Deegaano ay kamid tahay farxaane oo duleedka ka ah buulamareer, iyadoona ay xiligaani ay kaabiga ku hayaan Deegaanka golweyn.
Dhanka kale, waxaa la soo sheegayaa in Deegaanadaasi ay kusii qulqulayaan Ciidamo gurmad u ah DF, AMISOM.
Weerarada ay waxaa qaaday Ciidamada Huwaanta, waxa uuna kusoo beegmayaa weerarkaani xilli Talisyada CXD iyo AMISOM ay ku goodinayeen inay qaadi doonaan weerarkii ugu dambeeyay oo Alshabaab looga sifeyn lahaa Dalka.
DAAWO: SHIRKII DIGIL & MIRIFLE EE shalay ka dhacay yurub IYO KHUDBADII Libaaxii injineer saalax IYO CABDULAAHI black
Agoosto 29, 2014
WAAJIDPRESS – 29 Aug 2014:
SHIRKII DIGIL & MIRIFLE EE shalay ka dhacay yurub IYO KHUDBADII Libaaxii injineer saalax IYO CABDULAAHI black:
War deg deg ah: Barre Hiiraale iyo Axmed Madoobe oo markale kala booday
Waxaa fashilmay dadaalo lagu doonaayay Korneyl Barre Aadan Shire (Barre Hiiraale) iyo Maamulka Boobland ee jooga KISMAAYO , ka dib markii Axmed Madoobe uu la yimid sharuudo kale OO aan aheyn kuwii lagu heshiiyey.
Ergada uu diray Barre Hiiraale, ayaa waxaa horkacaayay Taliyaha Ciidanka Goobweyn Korneyl Cabdi Cigaal Jaamac, ayaa Markii ay KISMAAYO ay tageen uu Hogaamiyaha boobland Axmed Madoobe u sheegey arin aan lagu heshiinin.
Korneyl Cabdi Cigaal Jaamac iyo labadii nin ee kale ee la socotay, ayaa waxaa u cuntami weyday dalabka loo soo bandhigay, isla markaana ay xubnahan u sheegeen in balantii ay ka baxeen IGAD , Wakiilka AFEY IYO WASIIRADA Dowlada Federaalka, heshiiskiina uu sidaa ku burburey.
DAAWO VIDEO IYO SAWIRO: Ambasador Mursal OO MADAXWEYNAHA ku soo dhaweeyey Safaarada Soomaalida EE Dalka Turkey
WAAJIDPRESS – 28 Aug 2014:
Sawirada HOOSE waa from left : (Safiirka Turkey Dr. Maxamed Mursal , First secretary Dr. Abdulqadir Maxamed nuur OO ka soo jeeda beesha (Jiroon – DIGIL & MIRIFLE), Wasiirka ARIMAHA DIBADA , Agaasimaha GUUD EE Madaxtooyada Cali Balcad IYO Madaxweyne XASSAN)
Ambasador Dr. Maxamed Mursal oo maanta Madaxweynaha ku soo dhaweeyey Safaarada Soomaalida ay ku leedahay dalka Turkey – DAAWO:
DAAWO: TALIYIHII SOMALILAND EE MAANTA QABTEY SAAXDHEER OO KA WARBIXIYEY SIDA LOOLA WAREEGEY DEGMADAAS
Agoosto 28, 2014
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Agoosto, 2014.